Ọrụ Nhazi Ere na mgbazinye na Realtyww Info
Ọrụ Nhazi n'ime Mohali
Ọrụ Nhazi n'ime Punjab
Ọrụ Nhazi n'ime Ahmedabad
Ọrụ Nhazi n'ime Gujarat
Ọrụ Nhazi n'ime Chandigarh
1 - 10 nke 20 Ndepụta
Ebiputara site na Debbie McHugh
nlele Ọrụ Nhazi Bipụtara 2 weeks ago
Ebiputara site na Terry Burrows
nlele Ọrụ Nhazi Bipụtara 1 month ago
nlele Ọrụ Nhazi Bipụtara 2 months ago
Ebiputara site na Technocrats Horizons
Ebiputara site na Sidharth
Ebiputara site na shreyadesigner
nlele Ọrụ Nhazi Bipụtara 7 months ago
Ebiputara site na johntbromley
Ebiputara site na CNT Technologies
nlele Ọrụ Nhazi Bipụtara 8 months ago
Ekike bụ ekepụta atụmatụ ma ọ bụ nkwekọrịta maka iwu ihe, usoro ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya (dịka ihe owuwu ụlọ, ihe osise, usoro azụmahịa, eserese seraịki, na usoro ịkwa akwa).  Nhazi nwere nkọwa dị iche iche na mpaghara dị iche iche (lee usoro ọzụzụ n'okpuru). N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-echekwa na ịmebe ihe (dị ka ite, injinia, njikwa, njikwa, na eserese) na-echekwa iji echiche echepụta. Ingmepụta ihe na-adịkarị mkpa ịtụle usoro eji achọ mma, arụ ọrụ, akụ na ụba, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nhazi nke ihe ahụ. O nwere ike ịgụnye nyocha, echiche, ịme ihe, mmegharị mmekọrịta, na ịhazigharị. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịhazi ụdị ihe dị iche iche, gụnyere uwe, oghere onye ọrụ ọsịse, skyscrapers, njirimara ụlọ ọrụ, usoro azụmahịa, yana ọbụna ụzọ ma ọ bụ usoro iji chepụta.  Ya bu “imewe” puru ibu ihe di nkpa nke negosi na otiti ihe banyere ihe ma obu ihe (okike nke ihe), ma obu ngwaa maka usoro ihe okike dika esi egosi ya site na onodu ihe omuma. Ọ bụ omume na okike.